ओसाका डिसेम्बरमा मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
युनिभर्सल स्टुडियो जापान (USJ) २०१ Theme थीम सूचकांक ग्लोबल आकर्षण उपस्थिति रिपोर्ट अनुसार, युएसजे विश्वव्यापी शीर्ष २ 2014 मनोरञ्जन पार्कहरूमध्ये पाँचौं स्थानमा छ = शटरस्टक
जापानमा डिसेम्बर! कसरी जाडो चाँडो रमाइलो गर्न >
डिसेम्बरमा, पूर्ण हिउँद ओसाकामा आउँनेछ। सडकमा रूखका पातहरू खस्छन् र ती ना bare्गो हुन्छन्। यसको सट्टामा, क्रिसमसको रोशनी रूखहरूलाई दिइन्छ र तिनीहरू राती सुन्दर देखिन्छन्। यदि तपाइँ यस पटक ओसाकामा बस्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया तपाइँको कोट ल्याउनुहोस् किनभने चिसो छ। यस पृष्ठमा, म डिसेम्बरमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु।
ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि तपाईं जनवरीमा ओसाकामा बस्नुहुनेछ, तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि त्यस समयमा मौसम कस्तो छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई मौसमको बारेमा केहि विचारहरू दिनेछु। ओसाका, अन्य जापानी शहरहरु जस्तै, जनवरी को अन्त देखि फेब्रुवरी को शुरुवात मा वर्ष को सबैभन्दा चिसो मौसम हुनेछ। यस कारणका लागि, त्यहाँ जनवरीको शुरुमा नयाँ वर्षको बाहेक धेरै पर्यटकहरू छैनन्। ओसाकामा लगभग हिउँ छैन। दिनहरू घाममा पर्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले यदि तपाईं चिसोमा कडा हुनुभयो भने, तपाईं धेरै आरामसँग यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। ओसाकासँग धेरै तातो र स्वादिष्ट खाना छ, त्यसैले कृपया ती पनि रमाउनुहोस्! ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। ओसाकामा मौसमका लागि तलका लिंकहरू पालना गर्नुहोस्। तल जनवरीमा टोकियो र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। जनवरीमा ओसाकामा सामग्री वेटर (सिंहावलोकन) ओसाका जनवरीको शुरुमा मौसम (२०१)) ओसाका जनवरीको बीचमा मौसम (२०१)) ओसाका मौसम जनवरीमा (२०१ 2018) जनवरीमा ओसाकाको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन जनवरीमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 2018 2018१-२०१०) ओसाकाको जलवायु अन्य जापानी शहरहरू जस्तै प्रत्येक वर्ष जनवरी र फेब्रुअरीमा चिसो छ। ओसाकाको टोकियो जत्तिकै उस्तै मौसम छ। यद्यपि, जनवरीमा, ओसाका ...
यदि तपाइँ फेब्रुअरीको अवधिमा ओसाकामा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो धेरै चिसो हुनेछ। त्यहाँ लगभग हिउँ छैन, तर बाहिर हिंड्दा तपाईंको शरीरलाई धेरै चिसो बनाउँदछ। कृपया कोट जस्ता तपाईको सुटकेसमा जाडोका लुगाहरू राख्न नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा, म फेब्रुअरीमा ओसाका मौसम वर्णन गर्दछु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। महिना को बारे मा अधिक जान्न को लागी चयन गर्नुहोस्। तल फेब्रुअरीमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। ओसाका फेब्रुअरी (ओभरकाउ) मा ओसाका मौसम फरवरी (२०१)) को बीचमा ओसाका मौसम फेब्रुअरी (२०१)) को बीचमा ओसाका मौसम फेब्रुअरी (२०१ 2018) मा ओसाका फेब्रुअरीमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन फेब्रुअरी ※ जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसतमा हो (१ 2018 2018१-२०१०) जब यो चिसो हुन्छ, डिस्पोजेबल शरीरको तापक्रम धेरै उपयोगी हुन्छ = ओडोकमा एडोब स्टक, यो जनवरीको पछिदेखि फेब्रुअरीको शुरुमा वर्षको सबैभन्दा चिसो समय हो। कहिलेकाँही यसले सुकाउँछ, यद्यपि त्यहाँ कुनै हिउँ सulation्ग्रह हुँदैन। त्यहाँ फेब्रुअरीमा धेरै घमाइलो दिनहरू छन् तर हावा धेरै चिसो छ। यदि तपाईं चिसो मौसम मा राम्रो छैन भने, यो मफलर र दस्ताने संग राम्रो हुनेछ। यदि तपाईं मन्दिर र मन्दिरहरूको वरिपरि जानुहुन्छ भने तपाईं बाहिर लामो अवधिको लागि बस्नुहुनेछ।
अप्रिलमा ओसाका मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
जापान मा यो अप्रिल देखि मे को वसन्त पर्यटन मौसम हो। किनभने त्यहाँ धेरै न्यानो र आरामदायक दिनहरू छन्, पर्यटन स्थलहरू देश र विदेशका मानिसहरूसँगै थिए। ओसाका अप्रिलदेखि शिखर पर्यटन मौसम पनि अनुभव गर्दैछ। यदि तपाइँ अप्रिलमा ओसाकामा बस्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाइँ कस्तो किसिमको कपडा तयार पार्नुपर्दछ? यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई एक विचार दिन अप्रिलमा ओसाकाको मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अप्रिलमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। अप्रिलमा ओसाकामा सामग्री वेदर (सिंहावलोकन) ओसाका अप्रिल (२०१ 2018) को ओसाका मौसम अप्रिलको बीचमा (२०१ the) ओसाका मौसम अप्रिलको अन्तमा (२०१)) अप्रिलमा ओसाकाको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन अप्रिलमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 2018 2018१-२०१०) ओसाकाको जलवायु होन्शुका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै टोकियो जस्ता समान छ। अप्रिलमा, २० डिग्री उच्च तापमान भन्दा बढी दिन प्रचुर मात्रामा हुन्छन्। मौसम सामान्य रूपमा राम्रो छ त्यसैले तपाईं आरामदायक ठाउँहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। यो तातो छ, त्यसैले तपाईलाई सायद जम्परहरू र त्यस्ता दिनको आवश्यक पर्दैन। जे होस्, साँझमा तापक्रम ...
मेमा ओसाका मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यदि तपाईं मेमा ओसाका भ्रमण गर्नुहुन्छ भने कस्तो खालको लुगा लगाउनु पर्छ? यस पृष्ठमा, म मौसम, वर्षाको मात्रा र मे महिनाको लागि उत्तम लुगाहरूबारे छलफल गर्नेछु। ओसाका मेमा साथै होन्शुका अन्य ठूला शहरहरू जस्तै टोकियोमा धेरै सहज छन्। तपाइँ निश्चय पनि आफ्नो यात्राको मजा लिन सक्नुहुन्छ। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल मे टोकियो र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। मेमा ओसाकामा सामग्री वेदर (अवलोकन) ओसाका मेको शुरुवातमा (२०१)) ओसाका मौसम मई (२०१)) को बीचमा ओसाका मौसम मेमा (२०१ 2018) ओसाकाको मौसम मेमा (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन मेमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 2018 2018१-२०१०) मेमा, ओसाकामा अधिकतम तापक्रम २० डिग्री सेल्सियस भन्दा न्यानो रहन्छ। प्रत्येक पटक यो वर्षा हुन्छ, रूखहरू र फूलहरू बढ्छन् र उनीहरूको सुन्दर हरियो रंग देखाउँदछ। मानिसहरू अक्सर ओसाका कासल पार्क जस्ता ठूला पार्कहरूको माध्यमबाट घुम्छन्। सामान्यतया: तपाईलाई न्यानो कपडाको आवश्यक पर्दैन जस्तै घामको दिनमा कार्डिगनहरू। जहाँसम्म, यदि तपाइँ सजिलै चिसो हुनुभयो भने, यो केसमा ल्याउँदा एक राम्रो विचार हो। व्यापार मा, हामी लगाउँछौं ...
यदि तपाईं जूनमा ओसाका आउनुभयो भने, कृपया तपाईंको छाता नबिर्सनुहोस्। जुनमा, ओसाका लगभग एक महिनाको लागि वर्षाको मौसममा अन्य प्रमुख होन्शु शहरहरू जस्तै टोकियोमा प्रवेश गर्नेछन्। यस पृष्ठमा, म जूनमा ओसाका मौसमको बारेमा चर्चा गर्नेछु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईलाई अधिक जान्न को लागी महीना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जूनमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। जूनमा ओसाकामा सामग्री वेदर (सिंहावलोकन) ओसाका जूनको शुरुमा मौसम (२०१)) ओसाका जूनको बीचमा मौसम (२०१ middle) ओसाका मौसम जूनको अन्तमा (२०१)) जूनमा ओसाकाको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन जुनमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत हो (१ 2018 2018१-२०१०) ओसाकाको मौसम होन्शुका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै टोकियो जस्ता समान छ। यो जुनमा धेरै वर्षा हुन्छ र दिनहरू तातो र आर्द्र हुन्छन्। त्यहाँ कहिले जाडो हुन्छ जब चिसो हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईं सजिलै चिसो हुनुभयो भने, कृपया कार्डिगन वा यस्तै कपडा लिएर आउनुहोस्। पहिले, जूनमा वर्षा यति भारी थिएन। यद्यपि हालसालै ग्लोबल वार्मि .को कारण मौसम परिवर्तनको कारण वर्षाको मात्रा बढेको छ। यस कारणका लागि, कृपया एक स्रोतबाट पछिल्लो मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गर्नुहोस् जुन TV जस्तो नियमित अपडेट हुन्छ ...
यदि तपाईं जुलाईमा ओसाका जानुहुन्छ भने, कृपया तातो मौसमको लागि तयार हुनुहोस्। ओसाका, अन्य प्रमुख होन्शु शहरहरू जस्तै, जुलाई र अगस्टमा धेरै तातो छ। कृपया सावधान रहनुहोस् किनकि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसलाई प्रत्येक वर्ष तातो स्ट्रोक छ। यस पृष्ठमा, म जुलाईमा ओसाकाको मौसमको बारेमा चर्चा गर्नेछु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। जुलाई मा टोकियो र होक्काइडो को मौसम मा लेख छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। जुलाईमा ओसाकामा सामग्री वेदर (अवलोकन) जुलाईको सुरूमा ओसाका मौसम (२०१)) ओसाका जुलाईको बीचमा मौसम (२०१)) ओसाका मौसम जुलाईको जुलाई (२०१)) मा ओसाका जुलाईमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन जुलाईमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 2018 2018१-२०१०) ओसाकाको मौसम लगभग टोकियो जस्तै छ। तर गर्मी मा यो टोकियो भन्दा केही तातो र अधिक आर्द्र छ। जुलाईको सुरूमा, वर्षा stillतु अझै प्रभावमा छ। वर्षाको मौसम लगभग जुलाई २० को आसपास समाप्त हुन्छ। पछिल्लोमा, ओसाका त्यस समयमा गर्मीमा प्रवेश गर्नेछन्। गर्मीमा ओसाकामा अधिकतम तापक्रम 2018 30 डिग्री भन्दा बढी छ र यो नम पनि छ। यी कारणहरूले गर्दा लामो समय सम्म बाहिर हिंड्नु खतरनाक छ। त्यहाँ ...
यस पृष्ठमा, म अगस्तमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु। म पहिले ओसाकामा बस्ने गर्थें। ओसाका अगस्त मा वास्तव मा तातो छ। त्यसो भए, यदि तपाईं अगस्तमा ओसाकामा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं कहिलेकाँही वातानुकूलित कोठामा खर्च गर्नुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो शक्ति खपत गर्नुहुन्न। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अगस्तमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। अगस्तमा ओसाकामा सामग्री वेदर (सिंहावलोकन) ओसाका अगस्तको शुरुमा मौसम (२०१)) ओसाका अगस्तको बीचमा मौसम (२०१)) ओसाका मौसम अगस्तमा (२०१ 2018) ओसाकाको मौसम अगस्तमा (ओभरभ्यू) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन अगस्तमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 2018 2018१-२०१०) ओसाकाको मौसम होन्शुका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै टोकियो जस्ता समान छ। जे होस्, टोकियो आदिको तुलनामा, ओसाका शहरको केन्द्र अगस्टमा थोरै तातो छ। ओसाकाको बीचमा, हरियो सानो छ, केहि ओसाका कासल र अन्य बाहेक। डामर सडक कडा घामको साथ तातो हुँदैछ, त्यसैले यदि तपाईं सबै मार्गमा हिड्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईंको फिटनेस थकाउने जोखिम छ। यस कारणका लागि, म निम्न तीन चीजहरूको सिफारिश गर्न चाहन्छु। पहिले, ...
अक्टोबरमा ओसाका मौसम! तापमान र वर्षा
अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म जापानमा अद्भुत शरद seasonतु जारी छ। यो अक्टुबरमा ओसाकामा तुलनात्मक रूपमा चिसो हुनेछ, र राम्रो मौसम जारी रहन्छ। अक्टुबरमा, यो ओसाकामा यात्रा गर्न उपयुक्त समय हो भनेर भन्न सकिन्छ। यद्यपि, भर्खरको मौसम पूर्वानुमानका बारे सचेत हुनुहोस् किनकि एक अन्धकार आउँदो आउँदैछ। यस पृष्ठमा, म अक्टुबरमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। अक्टूबरमा टोकियो र होक्काइडोको मौसममा लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। अक्टुबरमा ओसाकामा सामग्री वेदर (अवलोकन) ओसाका अक्टोबर (२०१ October) को ओसाका मौसम अक्टुबरको बीचमा (२०१ Os) ओसाका मौसम अक्टुबरको अन्तमा (२०१ 2017) ओसाकाको अक्टुबरमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन अक्टुबरमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 2017 2017१-२०१०) यस पृष्ठमा म जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले घोषणा गरेको ओसाकाको अक्टूबरको मौसम डेटा निम्न रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। यो डाटालाई हेर्दै, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि अधिकतम तापमान एकदम उच्च छ। निश्चित रूपमा, अक्टुबरको पहिलो आधामा, त्यहाँ दिनहरू छन् जब अधिकतम तापमान २ degrees डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ। जे होस्, ती विशेष गर्मी दिनहरू बाहेक, अक्टोबरको पहिलो आधामा ...
ओसाकाको मौसम टोकियो र क्योटोमा लगभग समान छ। मौसम नोभेम्बरमा स्थिर छ, र त्यहाँ धेरै घमाइला दिनहरू छन्। तापक्रम सुन्दर छ, र यसलाई दर्शनीय स्थलहरूको लागि उत्तम मौसम भन्न सकिन्छ। ओसाकामा, शरद leavesतुको पातहरू नोभेम्बरदेखि मध्य डिसेम्बरको शुरुमा पुगेको हुन्छ। यस पृष्ठमा, म ओसका नोभेम्बरको मौसमको बारेमा विवरण दिनेछु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल नोभेम्बरमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। नोभेम्बरमा ओसाकामा अवलोकनवादर (तालिका) ओसाका नोभेम्बर (२०१ 2017) को ओसाका मौसम नोभेम्बर (२०१ 2017) को बीचमा ओसाका मौसम नोभेम्बर (२०१ 2017) को ओसाका मौसम नोभेम्बरमा ओसाका मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन नोभेम्बरमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 30 1981१-२०१०) नोभेम्बरमा ओसाकाको तापमान दिनको तातो घण्टामा पनि २० डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ। यदि तपाईं अलिकता हिड्नुभयो भने पनि तपाई पसिना भन्दा थकित हुनुहुन्न। यो धेरै रमाइलो मौसम हो, त्यसैले कृपया विभिन्न स्थानहरू हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस्। जे होस्, बिहान र बेलुका तापमान १०-१-2010 डिग्रीमा खस्नेछ। यो धेरै चिसो छ, त्यसैले म तपाईंलाई ल्याउन सिफारिस ...
तल डिसेम्बरमा टोकियो र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो र ओसाका जान चाहानुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा एकदम फरक छ।
जाडो मौसममा जापान यात्रा गर्दा तपाईले कस्तो किसिमको लुगा लगाउनु पर्छ? यदि तपाइँ आफ्नो देशमा जाडो चिसो अनुभव गर्नुहुन्न भने, तपाइँले के लगाउनु पर्छ होला भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई लुगाको बारेमा केहि उपयोगी जानकारीका लागि परिचय दिनेछु जब तपाईं जापानमा यात्रा गर्नुहुन्छ ...
ओसाकामा डिसेम्बरमा मौसम (अवलोकन)
ओसाका मौसम डिसेम्बर (२०१ 2017) को सुरूमा
ओसाका मौसम डिसेम्बर (२०१ 2017) को बीचमा
ओसाका डिसेम्बर (२०१ 2017) को मौसम
ग्राफ: डिसेम्बर मा ओसाका मा तापमान परिवर्तन
ओसाका डिसेम्बर मा मौसम टोकियो जस्तै छ। वर्षाका दिनहरू थोरै हुन्छन्। यो या त सुन्दर निलो आकाश वा चिसो देखिने बादल आकाश हो।
डिसेम्बरमा, तापक्रम दिनको सबैभन्दा तल्लो समयमा १ 15 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ। बिहान र बेलुका, यो फ्रिजबाट तल झर्दछ।
यो जनवरी वा फेब्रुअरी भन्दा थोरै तातो छ, तर यदि तपाईं चिसो मौसमसँग राम्रो हुनुहुन्न भने कोटको अतिरिक्त तपाईं मफलर वा पन्जा पनि लिनुहुन्छ।
जाडोको मौसमको चिसो देखिने दृश्य फैलिनेछ, तर शहरको केन्द्रमा, क्रिसमसको सुन्दर प्रकाशहरू यसको सट्टा रूखहरू रंग्नेछन्।
ओसाकामा क्रिसमसमा विरलै हिउँ पर्छ। जे होस्, क्रिसमसको वातावरण शहरको क्षेत्रमा उत्तम छ, त्यसैले छुट्टीको वातावरणको आनन्द लिनुहोस्।
जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले घोषणा गरेको ओसाकामा डिसेम्बरको मौसम जानकारी निम्न छ। कृपया सन्दर्भको लागि यो प्रयोग गर्नुहोस्।
न्यूनतम वायु तापमान 2.2
कुल वर्षा 3.5 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 61%
भीडका मानिसहरू र पर्यटन डिसेम्बर,, २०१ on मा डोन्टनबोरी, नम्बा ओसाका क्षेत्र, ओसाका, जापान = शटरस्टक
डिसेम्बरको सुरुमा तपाईं ओसाकामा खस्ने र colorsहरू रमाउन सक्नुहुन्छ। ओसाका कासल पार्क र शहर वरिपरिका अन्य ठाउँहरूमा शरद पातहरू पाउन सकिन्छ।
यस समयमा ओसाकाको आकाश एकदम नीलो छ। तपाईं पर्यटन क्षेत्रमा सुन्दर तस्वीर लिन सक्नुहुनेछ। तथापि, जाडो ओसाकामा आइपुगेको छ। बाहिर जाँदा, कृपया कोट लगाउनुहोस्।
डिसेम्बरको शुरुमा सूर्योदय समय करीव ::6० हुन्छ। सूर्यास्त समय लगभग १:50::16:47 छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 12.0
न्यूनतम वायु तापमान 0.4
कुल वर्षा0मिमी
ओसाका, जापान मा १th डिसेम्बर २०१ 14 मा लिइएको। ओसाका, जापान = शटरस्टकमा Summioshi ताइशा तीर्थ
मध्य डिसेम्बर सम्ममा, ओसाकाको सडकहरू क्रिसमसको वातावरणले भरिनेछ।
जापानमा, बर्षको अन्त्यमा, साँझ काम गर्ने साथीहरूसँग रेस्टुराँमा भोज मनाउने चलन छ।
त्यसैले डोटनबोरी जस्ता प्रख्यात स्थानहरू धेरै व्यक्तिको भीडले भरिएका छन्।
यो रात चिसो छ, तर कोट लगाउन र शहर ओसाका वरिपरि हिंड्नु राम्रो हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 13.9
न्यूनतम वायु तापमान 1.5
कुल वर्षा 24.0 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 48%
डिसेम्बर २,, २०१:: जापानको डोटनबरी, ओसाका, शटरस्टकमा फ्रन्ट शप प्रसिद्ध रेष्टुरेन्टहरूको धेरै बिलबोर्ड
डिसेम्बरको अन्तमा, क्रिसमस पछि, मानिसहरू प्राय: नयाँ वर्षको तयारीका लागि किनमेल गर्न जान्छन् ताकि शहर एकदम व्यस्त छ। तापक्रम अझ तल झर्नेछ, तर शहर रमाइलो भएकोले बाहिर जान रमाईलो हुनेछ।
डिसेम्बरको अन्तमा सूर्योदय समय करीव 7::30० हो। सूर्यास्त समय करिब १:16::53 छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले डिसेम्बरको सुरूवातको लागि 2019th औं समय, डिसेम्बरको बीचमा १5औं समय र डिसेम्बरको अन्त्यको लागि २th औं समय पोस्ट गरें।
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, कृपया तलका लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> ओसाका! १ Best उत्तम पर्यटक आकर्षणहरू: डोटनबोरी, उम्मेडा, युएसजे आदि।
>> कन्साइ एयरपोर्ट (KIX)! कसरी ओसाका, क्योटो / अन्वेषण टर्मिनल १, २ सम्म पुग्ने
"डिसेम्बर" मा फिर्ता